ဒီနွေရာသီမှာရော ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ အသုံးစရိတ် စံချိန်သစ်တင်နိုင်မလား
နွေရာသီ အသုံးစရိတ်ပေါင်(၁)ဘီလီယံမှတ်တမ်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ (၃)နှစ်ဆက် ချိုးဖျက်နိုင်မှာလား
29 Jul 2018 . 3:43 PM
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလ ပိတ်သိမ်းဖို့ (၁၂)ရက်သာ ကျန်ရှိတော့ချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့ ပေါင်(၁)ဘီလီယံမှတ်တမ်းကို (၃)နှစ်ဆက်ချိုးဖျက်နိုင်မယ့် အနေအထားရှိနေပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေရဲ့ အခုနွေရာသီကာလ အပြောင်းအရွှေ့အသုံးစရိတ်က ပေါင်(၉၃၅)သန်းအထိရှိနေပြီး လီဗာပူးလ် Liverpool အသင်းက ပေါင်(၁၆၇.၉)သန်းနဲ့ ငွေကြေးအများဆုံးသုံးစွဲထားတဲ့အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို သူတို့နောက်မှာ ၀က်စ်ဟမ်း၊ အာဆင်နယ်၊ မန်ယူ၊ ဘရိုက်တန်အသင်းတွေက အစဉ်လိုက်တိုင်း ရှိနေတယ်။
ဒီနွေရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ကြေးအမြင့်ဆုံးအပြောင်းအရွှေ့တွေထဲမှာ မာရက်ဇ် Mahrez (လက်စတာမှ မန်စီးတီး- ပေါင်သန်း၆၀)၊ အယ်လစ်ဆန် Allison (ရိုးမားမှ လီဗာပူးလ်- ပေါင် ၆၇သန်း)တို့လည်း ပါဝင်နေတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်း အသုံးစရိတ်အများဆုံးပြိုင်ပွဲအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတာက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက ပေါင်(၁.၄)ဘီလီယံအထိ အသုံးပြုခဲ့တာပါ။
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလက လာမယ့်သြဂုတ်လ(၉)ရက်မှ ပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်တာကြောင့် အခုနှစ်မှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲက အရင်စံချိန်ကို ထပ်ပြီးချိုးဖြတ်နိုင်ဦးမယ့် အနေအထားပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ အခုလို ကစားသမားတွေကို ကြေးကြီးပေးခေါ်ယူနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ အင်္ကျီစပွန်ဆာက ရရှိတဲ့ဝင်ငွေ မြင့်မားလာတာကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ အင်္ကျီစပွန်ဆာ၊ အင်္ကျီလက်မောင်းစပွန်ဆာတွေကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေ စုစုပေါင်းက စံချိန်တင်ပမာဏဖြစ်တဲ့ ပေါင်(၃၆၀)သန်းအထိရှိခဲ့ပြီး အရင်နှစ်ကထက် ပေါင်သန်း(၅၀)မြင့်တက်လာခဲ့တယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်အသင်း(၂၀)ရဲ့ အင်္ကျီစပွန်ဆာတစ်ခုတည်းက ရရှိတဲ့ဝင်ငွေက ပေါင်(၃၁၃.၆)သန်းရှိခဲ့တာကြောင့် အရင်နှစ်ကထက် ပေါင်(၃၁.၈)သန်း မြင့်တက်လာသလို၊ အင်္ကျီလက်မောင်းစပွန်ဆာကနေ ပေါင်(၄၆)သန်းရရှိခဲ့လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက် ပေါင်သန်း(၂၀) ပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အင်္ကျီစပွန်ဆာကြေး အများဆုံးအသင်းက မန်ယူ Manchester United ဖြစ်ပြီး Chevrolet ကုမ္ပဏီနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အရ (၁)နှစ်ပေါင်(၄၇)သန်းအထိရရှိနေတာပါ။ သူတို့နောက်မှာတော့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအသင်းက ပေါင်(၄၅)သန်းနဲ့ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် Premier League ပြိုင်ပွဲဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်နေသလို ကဏ္ဍအသီးသီးက ရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်း (၁)နှစ်ထက်(၁)နှစ် ပိုများလာတာကြောင့် ကစားသမားတွေကို ကြိုက်ဈေးပေးခေါ်ယူနေတာက သိပ်တော့မဆန်းပါဘူး။ လက်ကျန်အပြောင်းအရွှေ့ရက်တွေမှာလည်း ကစားသမားသစ်တွေကို ဆက်လက်ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိနေတာကြောင့် နွေရာသီအသုံးစရိတ် ပေါင်(၁)ဘီလီယံမှတ်တမ်းကို (၃)နှစ်ဆက်ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Photo:mancity.com,Premier League,Mirror,Getty Images
နှရောသီ အသုံးစရိတျပေါငျ(၁)ဘီလီယံမှတျတမျးကို ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှေ (၃)နှဈဆကျ ခြိုးဖကျြနိုငျမှာလား
နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလ ပိတျသိမျးဖို့ (၁၂)ရကျသာ ကနျြရှိတော့ခြိနျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျအသငျးတှအေနနေဲ့ ပေါငျ(၁)ဘီလီယံမှတျတမျးကို (၃)နှဈဆကျခြိုးဖကျြနိုငျမယျ့ အနအေထားရှိနပေါပွီ။ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှရေဲ့ အခုနှရောသီကာလ အပွောငျးအရှအေ့သုံးစရိတျက ပေါငျ(၉၃၅)သနျးအထိရှိနပွေီး လီဗာပူးလျ Liverpool အသငျးက ပေါငျ(၁၆၇.၉)သနျးနဲ့ ငှကွေေးအမြားဆုံးသုံးစှဲထားတဲ့အသငျးအဖွဈ ရပျတညျနသေလို သူတို့နောကျမှာ ဝကျဈဟမျး၊ အာဆငျနယျ၊ မနျယူ၊ ဘရိုကျတနျအသငျးတှကေ အစဉျလိုကျတိုငျး ရှိနတေယျ။
ဒီနှရောသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ကွေးအမွငျ့ဆုံးအပွောငျးအရှတှေ့ထေဲမှာ မာရကျဇျ Mahrez (လကျစတာမှ မနျစီးတီး- ပေါငျသနျး၆၀)၊ အယျလဈဆနျ Allison (ရိုးမားမှ လီဗာပူးလျ- ပေါငျ ၆၇သနျး)တို့လညျး ပါဝငျနတေယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလအတှငျး အသုံးစရိတျအမြားဆုံးပွိုငျပှဲအဖွဈ စံခြိနျတငျထားတာက ပရီးမီးယားလိဂျဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီက ပေါငျ(၁.၄)ဘီလီယံအထိ အသုံးပွုခဲ့တာပါ။
နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလက လာမယျ့သွဂုတျလ(၉)ရကျမှ ပိတျသိမျးမှာဖွဈတာကွောငျ့ အခုနှဈမှာလညျး ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲက အရငျစံခြိနျကို ထပျပွီးခြိုးဖွတျနိုငျဦးမယျ့ အနအေထားပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှေ အခုလို ကစားသမားတှကေို ကွေးကွီးပေးချေါယူနိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှထေဲမှာ အင်ျကြီစပှနျဆာက ရရှိတဲ့ဝငျငှေ မွငျ့မားလာတာကလညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှေ အင်ျကြီစပှနျဆာ၊ အင်ျကြီလကျမောငျးစပှနျဆာတှကေနေ ရရှိခဲ့တဲ့ဝငျငှေ စုစုပေါငျးက စံခြိနျတငျပမာဏဖွဈတဲ့ ပေါငျ(၃၆၀)သနျးအထိရှိခဲ့ပွီး အရငျနှဈကထကျ ပေါငျသနျး(၅၀)မွငျ့တကျလာခဲ့တယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ကလပျအသငျး(၂၀)ရဲ့ အင်ျကြီစပှနျဆာတဈခုတညျးက ရရှိတဲ့ဝငျငှကေ ပေါငျ(၃၁၃.၆)သနျးရှိခဲ့တာကွောငျ့ အရငျနှဈကထကျ ပေါငျ(၃၁.၈)သနျး မွငျ့တကျလာသလို၊ အင်ျကြီလကျမောငျးစပှနျဆာကနေ ပေါငျ(၄၆)သနျးရရှိခဲ့လို့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈထကျ ပေါငျသနျး(၂၀) ပိုမြားလာခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ အင်ျကြီစပှနျဆာကွေး အမြားဆုံးအသငျးက မနျယူ Manchester United ဖွဈပွီး Chevrolet ကုမ်ပဏီနဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျအရ (၁)နှဈပေါငျ(၄၇)သနျးအထိရရှိနတောပါ။ သူတို့နောကျမှာတော့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးအသငျးက ပေါငျ(၄၅)သနျးနဲ့ ဒုတိယအမြားဆုံးဖွဈနပေါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ Premier League ပွိုငျပှဲဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူကွိုကျအမြားဆုံးပွိုငျပှဲဖွဈနသေလို ကဏ်ဍအသီးသီးက ရရှိနတေဲ့ဝငျငှတှေကေလညျး (၁)နှဈထကျ(၁)နှဈ ပိုမြားလာတာကွောငျ့ ကစားသမားတှကေို ကွိုကျဈေးပေးချေါယူနတောက သိပျတော့မဆနျးပါဘူး။ လကျကနျြအပွောငျးအရှရေ့ကျတှမှောလညျး ကစားသမားသဈတှကေို ဆကျလကျချေါယူသှားဖို့ရှိနတောကွောငျ့ နှရောသီအသုံးစရိတျ ပေါငျ(၁)ဘီလီယံမှတျတမျးကို (၃)နှဈဆကျခြိုးဖကျြနိုငျဖို့ နီးစပျနတောလညျးဖွဈပါတော့တယျ . . .